मूल भिन्सेन्ट भ्यान गग्स एक उत्कृष्ट गुणवत्ता आधुनिकीकरण प्राप्त गर्दछ
डेभिडब्रिडबर्ग सेप्टेम्बर 19, 2020 मार्च 23, 2021
किन भिन्सेन्ट भ्यान गग् चित्रहरू?
भिन्सेन्ट भ्यान गोघले आफ्ना कुनै पनि मास्टरपिसहरू कहिल्यै बेचेनन्। त्यो डुब्न दिनुहोस्: हामी मध्ये धेरैको लागि, कला संघर्षको बारेमा छ।
त्यसो भए शुरुआतीका लागि कहाँ सजिलो हुन्छ? धेरै व्यक्तिहरूका लागि डिजिटल कलाकृतिले तपाईंको हात मैला हुने सबै आनन्द दिन्छ, तर औँला पेंटिंग बिना वा स्मेर्ड स्मक्स बिना।
यदि मेरो शोषणले तपाइँलाई तपाइँको हातले डिजिटल कला बनाउने प्रयास गर्न प्रेरित गर्दछ म तपाइँको लागि धेरै खुशी हुनेछु। मलाई थाहा दिनुहोस् तपाइँ कसरी गर्नुहुन्छ।
मेरो कला स्कूल दिनहरूमा हामी पोस्ट आधुनिक कला सिद्धान्त अध्ययन। तपाईं सोध्दै हुनुहुन्छ, त्यो के हो? साधारणतया विगतलाई राख्नुहोस् र वर्तमान विवाहित जो धेरै नयाँ बन्नुहोस्।
तपाइँसँग निष्पक्ष हुनको लागि, मैले स्वीकार्नुपर्दछ कि म संघर्ष गर्दैछु जस्तो भान गोगले आफ्नो छोटो जीवनमा कहिलेकाहीं गरेका थिए।
म आज मेरो कलाकृति पोस्टर र क्यानभास प्रिन्टको रूपमा बेच्छु।
मसँग यी यात्रामा मसँग आऊ।
भ्यान गोग संग्रहालय एम्स्टर्डम र रिजक्समुसेम
"राम्रो काम गर्नका लागि राम्रोसँग खानुपर्दछ, राम्रोसँग बस्नुपर्दछ, समय-समयमा भाग्नुपर्दछ, पाइप पिउनुपर्दछ, र कफीलाई शान्तिपूर्वक पिउनु पर्छ।" "म छनौट गरेर अपराधी होइन तर भाग्यले हुँ।"
भिन्सेन्ट भ्यान गोग उद्धरण https://www.vangoghgallery.com/misc/quotes.html
मैले काम गरेको धेरै भ्यान गो चित्रहरु भान गोग संग्रहालय एम्स्टर्डम वा रिजक्सुसेममा राखिएका छन्। यी दुई संस्थाहरूले डाउनलोडका लागि चित्रहरूको छविहरू प्रदान गर्छन्। म उनीहरूप्रति सदा कृतज्ञ छु।
यदि तपाईं एम्स्टर्डमको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ र यी संग्रहालयहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने, म सुझाव दिन्छु कि पहिले आरक्षण गर्नुहोस्। तपाईं निराश हुनुहुने छैन।
आधिकारिक संग्रहालय साइटहरू: भान गोग संग्रहालय एम्स्टर्डम र राष्ट्रिय संग्रहालय.
भ्यान Gogh सुरु गर्न कहीं
२०० In मा मैले कलाकार बन्ने निर्णय गरे। एउटा विचार दिमागमा आएको थियो, किन एउटा मास्टरपिसबाट फिगरलाई कम्प्युटर प्रयोग गरेर अर्को बिल्कुलै भिन्न प्रकारको उत्कृष्ट कृतिमा राख्नुभएन? तपाईं यो देख्न सक्नुहुन्छ।
२०० in मा पनि यो यति कट्टरपन्थी थिएन।
अर्को केहि बर्षमा, मैले सोच्न थाले कि कलाको विभिन्न विधाहरू फ्यूज गर्ने बारेमा के हो?
२०१० मा मैले एक सेवानिवृत्त ईन्जिनियरको साथ साथी बनाएँ, पहिलो नाम तेभिस। फोटोग्राफीमा उहाँसँग एक मजबूत पृष्ठभूमि छ। २०१२ मा मैले फोटोशप पढ्न शुरू गरें।
२०१ By सम्म म उत्पादनमा गएँ। टेभिसको मार्गनिर्देशन र प्रतिक्रियाले मलाई राम्रो छवि गुणहरूमा प्रेरित गर्दछ।
विस्तृत रूपमा तल पुग्न आवश्यक छैन। तपाईं परिणामहरू हेर्न चाहनुहुन्छ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा भ्यान गोग मुरल II
के तपाई यस चित्रको आनन्द लिइरहनु भएको छ? हेडहरू यो माथि छ, पुच्छरहरू यो तल छ। LOL तपाईं कसैलाई यो प्रेम हुनेछ। यस छविमा भिन्सेन्ट भ्यान गो चित्रका तीन तह छन्। बायाँबाट भित्र पस्दा किरणहरूले एक तह गहिरो काट्छन्। दायाँबाट आएका किरणहरूले दुई तह गहिरो काट्छन्।
अब के? मसंग तिम्रो लागि केहि छ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा भ्यान Gogh म्युरल III को कम्पन
तपाईले रातो र सुन्तलाको बाँया भागमा सागका पातहरू र दायाँ पट्टि ब्लुज लिन सक्नुहुन्छ। खुला सेतो खाली स्थान द्वारा बनाईएको चित्रहरूको घुमाईले गहिराई दिन्छ।
यो प्रभावशाली सुन्दर प्रिन्ट रंग र चरित्रको साथ डब्लिनको प्रसिद्ध ढोका जस्तै जीवित छ।
म गहिरो जान चाहन्छु… ..
... तर कुनै डर छैन, म यी लेखहरू मनोरन्जन पक्षमा राख्नेछु।
डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा स्टेन्ड ग्लास I
यो भ्यान Gogh को "कामबाट दिउँसो आराम" मा आधारित छ। यसका मेरो प्रिन्टहरू अविश्वसनीय छन्। यदि कसैले तपाईंलाई अहिलेसम्म भनेको छैन। LOL चमक कागज विकल्प साँच्चै शानदार छ।
दुर्भाग्यवश मलाई भ्यान गोग व्यक्तिगत रूपमा थाहा थिएन। म मानिसहरु लाई मेरो सृष्टि को बारे मा लजालु छैन। ऊ जीवनमा छालिएको थियो वा जीवनमा सास्ती दिइयो।
यदि तपाईं उनका लेखहरू पढ्नुहुन्छ भने, तपाईं छक्क पर्नुहुनेछ। भिन्सेन्ट एकदम राम्रो चिठीमा थिए। पढ्ने भ्यान गोगले मानसिक रूपले बिरामीको बारेमा धेरै धारणाहरूलाई चुनौती दिन्छ।
"एक इडलर र अर्को इडरर बीच ठूलो भिन्नता छ। त्यहाँ कोही छ जो आलस्य र चरित्रको अभावबाट आल .्करित हुन्छ, आफ्नो स्वभावको आधारमा कारण। यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं ती मध्ये एकको लागि मलाई लिन सक्नुहुन्छ। त्यसोभए त्यहाँ अर्का प्रकारको इडलर छ, आफैंको बाबजुद पनि आइडलर उत्पादक हुन, किनकि विपत्तिजनक परिस्थितिले उनलाई जबरजस्ती यस अवस्थामा पुर्‍याएको छ। यस्तो व्यक्तिलाई उसले के गर्न सक्दछ भन्ने कुरा सँधै थाहा हुँदैन, तर उसले सहजै महसुस गर्छ, म कुनै कुराको लागि राम्रो छु! मेरो अस्तित्व बिना कारण छैन! मलाई थाहा छ म एकदम फरक मान्छे हुन सक्छु! म कसरी कामको हुन सक्छु, म कसरी सेवाको हुन सक्छु? म भित्र केहि छ, तर यो के हुन सक्छ? ऊ एकदम अर्का सुस्त छ। यदि तपाइँ मनपराउनुहुन्छ भने म ती मध्ये कुनै एक लिन सक्छु। "
- भिन्सेन्ट भ्यान गोघ, भिन्सेन्ट भ्यान गोग को पत्र
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, मेरा प्रथम छविहरू सबै वैचारिक कार्यहरू थिए।
अन्य डिजिटल उपकरणहरू लागू गर्दै
अब म उपकरणहरूसँग खेल्न थाल्छु। तपाईले सँधै एउटा ग्याजेट प्राप्त गर्नुभयो, के गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चकित हुनुहोस्, र केहि शान्त आवाजको साथ आउँनुभयो? वा नयाँ परिप्रेक्ष्य?
अन्तर्निहित भ्यान गोग एलोन्ड ब्लासम, यस्तो कोमल र सूक्ष्म चित्रकारी हो।
गोलाकार III भ्यान Gogh डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा
यो भ्यान गोगको साइप्रस पेन्टि of मध्ये एक हो। तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ कि मैले चित्रकला विभिन्न तरीकाले प्रयोग गरेको छु। तपाईंले पाउनुहुनेछ मैले अन्तर्निहित पेन्टिंग धेरै पटक प्रयोग गरेको छु।
क्षेत्र van भ्यान Gogh डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा
तलको टुक्रा मा प्रतिक्रिया खुशी छ। मैले रwor्गेरा गरेको र colors्गहरू दर्शकहरूको भित्र गहिरो चिंगारी हुन्छ।
देहाती २० भ्यान गोग
भिन्सेन्ट भ्यान गग "आइरिसिस", यो कलाकारले व्यक्त गरेको कुनै कुरा जस्तो छैन। भ्यान गोग आफ्नो समयमा यति धेरै खोजी गरिएको थियो, के तपाई सोच्नुहुन्छ कि ऊ कम्प्युटर कला खोजी गर्न चाहन्छ?
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा इनभ्लेन्ड ब्लेन्ड van भ्यान गोग
"गुलाब र आइरिसिस", मैले विस्तृत रूपमा यो पेन्टि used प्रयोग गरेको छु। अन्तर्निहित पेंटिंगको सरासर टिकाऊपनबाट प्रत्येक पटक छक्क पर्छु किनकि मैले डिजिटल प्रविधिहरू लागू गरें।
यस भित्रको रंगमा परिवर्तनहरू जटिल छन्। कुल सात विभिन्न संस्करणहरू पुन: कार्य गर्दै, तपाईले र wonderful्ग योजना फेला पार्नको लागि आफ्नो अद्भुत ठाउँ सजाउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न संस्करणहरू तीन फरक संग्रहमा बिखेरिएका छन्: देहात, ब्लेन्ड र इनभ् ब्लेन्ड।
तल भिन्सेन्ट भ्यान गोग आइरिसिसका धेरै छन्। यस पटक अन्तर्निहित पेंटिंग परिवर्तन गरिएको छैन। अझै आधुनिकीकरण पूरा भयो जस्तो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ।
BW6भ्यान Gogh डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा
यो कालो र सेतो संग्रह, BW परिप्रेक्षमा एक उपन्यास प्रयोग थियो। तपाईले उही सेतो बालीलाई कालो मा मेरो संग्रह भित्र देख्न सक्नुहुन्छ।
उपकरणको साथ प्रयोगको नेतृत्व गरियो तहगत संग्रह.
मेरो जीवनका केही कलाकारहरू जुन मैले खोज्छु उनीहरूले मलाई यी कार्यहरूको लागि प्रशंसा दिए। म दूर उडाियो र धेरै आभारी थियो।
डिजिटल उपचारको लागि "बदाम ब्लोसम" मेरो उद्देश्यका लागि एक माध्यमको रूपमा फेरि धेरै टिकाऊ साबित भयो। रंगहरू तपाईंको ध्यान खिच्नको लागि हो। तपाईंको घरमा अद्भुत उच्चारण टुक्राको रूपमा कार्य योग्य।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा तह2भ्यान गोग
"गुलाब र आइरिसहरू" को बिरूद्ध "बदाम ब्लासमहरू" को बिरूद्ध मिसनको बहिनीको टुक्रा हुन्छ जुन बदाम ब्लासमसँग हरियो रंगको हुन्छ। रातोमा यो उत्सव हो। तपाईंको लाइब्रेरी वा बैठक कोठामा धनी हरियोमा कलाले काठको बखत प्रशंसा गर्दछ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा तह5भ्यान गोग
सुन्तला रातोको बारेमा तपाइँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? मेरो विचार सुन्तला रातो एक बच्चाले मलाई आश्चर्यमा छोडिदिए। नौसेना ब्लुज कालोमा बढी चकित भए। प्रिन्टको आकारमा निर्भरता यो छवि सानो र सूक्ष्मबाट ठूला र शक्तिशालीमा चल्दछ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा तह9भ्यान गोग
"कामबाट दिउँसो आराम", यो प्रेम हो। यो आधुनिकीकरण सिर्जना गर्न त्यहाँ एक निश्चित खुशी थियो।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा तह 14 भ्यान गोग
मँ यो ब्ल्गमा तपाईसँग सम्बन्धित भए झैं म जेनरहरू मिलाउँछु। समकालीन कलाकृतिमा विषय वस्तु बन्छ। तपाईं आफ्नो टाउको कोरेर हुनुहुन्छ, मेरो मतलब एक व्यक्तिको चित्र अब एक चीज हो।
तपाइँलाई यो प्रदर्शन गर्न म एक भ्यान गो र दुई नन भ्यान गोग छविहरू सामेल गर्दछु। तपाईं पनि हेर्न सक्नुहुन्छ समकालीन संग्रह.
छविहरूको संग्रह विषय बाट वस्तुमा सर्छ, त्यसपछि न्यूनतम आईकनमा।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा समकालीन २ भ्यान गोग
एउटा पोशाकमा प्रिन्स अब एक गुडिया जस्तै प्लास्टिकको र्यापमा छ।
समकालीन David हन्नेमान डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा
Michelangelo के सोच्ने थियो? उसको आँखाले यो आइकन के हो बुझ्न सक्दैन। हामी दाऊदको सिल्हूट बुझ्छौं। विचारहरूको सरल आन्दोलन तपाईंलाई संलग्न गर्न को लागी हो।
समकालीन विचारहरूको संसारबाट तपाईं कलाको बारेमा भिन्न दृष्टिकोण राख्नुहुनेछ। के यो कट्टरपन्थी को परिभाषा हो? LOL
तपाई यहाँ कुनै बान्की देख्न सक्नुहुन्छ। म कामको एक शैलीमा कहिले पनि बसोबास गर्दिन। यो कलाकारहरूको लागि वर्जित थियो। एकल शैली नलिनको लागि मैले मेरा कलाकारहरूको सर्कलमा प्रशस्त पुशब्याक प्राप्त गरें।
पहिले मलाई लाग्छ तपाईलाई मनोरन्जन गर्नु महत्वपूर्ण छ। दोस्रो डिजिटल उपकरणहरू प्रयोग गरेर मलाई स्वतन्त्रता चित्रकारहरूसँग अनुमति छैन। तेस्रो म ग्यालरी मालिक द्वारा निर्देशित गरिएको ग्यालरी सेटिंगमा छैन। अर्थ के बेच्दछ तपाईंसँग मेरो सम्बन्धको कारण हो। अरु कसैले पनि त्यो पत्ता लगाउन गइरहेका छैनन् र मलाई एक शैली वा एक विचारमा राख्नुहोस्।
पोस्ट पोष्ट कला
यो छ अमेरिकी बौद्धिक संग्रह भित्ति चित्र विवरण:
"पप कला पोष्ट गर्नुहोस्, सोच र अमेरिकी सपनाहरूको ठूलो संसार। यी प्रिन्टहरू9x4फिटको आकारमा छाप्न सकिन्छ। सानो आकारहरू ठूलो फ्रेम भएको देखिन्छ। "
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा अमेरिकी बौद्धिक संग्रह भित्ति चित्र
पप कला भियतनाम युद्ध पछि देखि हाम्रो संस्कृति संग सम्बन्धित छ। पोष्ट पोप आर्ट अधिक संस्कृति को अधिक जटिलता संग जोडिएको छ हालका बर्षहरूमा। र introduced्गहरू पेश गरियो, जस्तै पिन्कहरू, रातो, सुन्तला रंग, र चिल्लो। साग को प्राकृतिक दुनिया बाट कलाकृति टाढा सार्दै।
अमेरिकी बौद्धिक6डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा
म न्यू योर्क शहर पेन्टहाउसमा अमेरिकी बौद्धिक6देख्न सक्छु। यस भित्तासँग शक्ति र भव्यता छ कि एक भनाइ छ।
अमेरिकी बौद्धिक7डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा
अमेरिकी बौद्धिक the बहिनीको अंश हो। भ्यान गोग बदाम ब्लोम्सको सरासर हरामीकरणले सांस्कृतिक अवस्थाको प्रश्न खडा गर्दछ। यी कार्यहरू शक्तिशाली राजनीतिक छन्। अमूर्तताहरूमा गहिरो हुँदै जान, म तपाईंलाई अर्थको लागि यी सोच्न छोड्दछु।
मेरो युक्ति लेखक र दंतकथा मार्क ट्वेनको विपरित हो।
“यस कथामा एक मनसाय खोज्ने व्यक्तिको मुद्दा चलाइनेछ; व्यक्तिहरू यसमा नैतिक पत्ता लगाउन कोशिस गरिरहेछन्; व्यक्तिले त्यसमा प्लट खोज्ने प्रयास गर्दै गोली हान्न सकिन्छ।
लेखकको अर्डर द्वारा
GG, आदेशहरूको CHEIF "
- मार्क ट्वेन, हक फिनको एडभेन्चरस
अर्को पिन्क र फ़िरोज़ा अमेरिकी बौद्धिक ११ मा तपाईका लागि यो धेरै भिन्न दिशा हो। तपाईको उज्ज्वल सनी विशाल बैठक कोठामा रिबन सम्बन्धित छ। भ्यान गगको "बदाम खिल" अन्तर्निहित हो।
अमेरिकी बौद्धिक 11 डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा
तल तपाईं फ्रान्सेली फार्म क्षेत्रहरु हेर्नुहोस् १ 135 बर्ष पहिले। अन्तर्निहित पेंटिंग पहिले म द्वारा परिमार्जन गरिएको थियो, र अघिल्लो कार्यहरूमा प्रयोग गरियो। हरियो आकाश र धनी पहेलो सुन मेरो परिवर्तन हो।
अमूर्त देशको साइड छविमा बिस्तारै टम्बल हुँदैछ।
अमेरिकी बौद्धिक 13 डेविड ब्रिडबर्ग द्वारा
भिन्सेन्ट भ्यान गोगको आधुनिकीकरण
यो राजनीतिक स्क्रोग संग्रह आधुनिक कला हो, तर उत्तर आधुनिकतावादको छत्रमुनि।
के तपाई सोचिरहनु भएको छ, "स्क्र्याग" के हो? एक स्क्र्याग बढ्दो मारिजुआना बिरूवाहरूमा धातुको तार जाल हो। बोटको कलियों जालमा तानिन्छ र बिरूवा बढ्नका लागि बिरूवा अझ बढ्छ।
राजनैतिक कुराको रूपमा लिईन्छ, यहाँ र अहिले गाँजा उपयुक्त छ। हामी व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको लागूऔषध प्रयोगसँग सम्बन्धित अपराधको लागि बाँया र दायाँ जेल हाल्दै छौं। यो उत्तम कर भुक्तानी पैसा को बर्बादी हो। नराम्रो लक गर्ने ब्यक्तिले धेरै परिवारलाई अनावश्यक चोट पुर्‍याउँछ। JMO यस लेखन को रूप मा चीजहरू परिवर्तन हुँदैछन्।
म धुम्रपान गर्ने वा मारिजुआनाको टकर होइन।
शीर्षकहरू "भर्खरको x" को रूपमा चल्दछ। आधुनिक को लागि पर्यायवाची भएको हाल। "भर्खरको" एक प्लेसहोल्डर हो "शीर्षकविहीन" जुन धेरै कलाकारहरूद्वारा विज्ञापन नउसियम प्रयोग गरिएको थियो। मेरो सlections्ग्रहमा मँ यस शीर्षकलाई केहि फरक तरिकाले अदला-बदली गर्छु।
तपाईं सोध्दै हुनुहुन्छ जुन यो आधुनिक थीम भएको संग्रह उत्तर आधुनिकता बनाउँछ? भूत र वर्तमानको मिश्रण।
भिन्सेन्ट भ्यान गोग फार्म फाँटहरू ब्रिटिश म्यूजियम स्काइलाइटमा राखिएको छ। संग्रहमा तपाईले केही क्रूरतापूर्वक कठोर कथनहरू पाउनुहुनेछ, जुन सोच्न उत्तेजकजनक थियो। र तपाईं केहि धेरै सुन्दर कलाकृति पाउनुहुनेछ।
तलको तस्विर भ्यान Gogh व्युत्पन्न कार्य होईन। छविले भिन्सेन्ट भ्यान गोग व्युत्पन्न छविमा डोर्‍याउँछ। यी दुई अर्को बहिनी टुक्रा छन् तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ।
जब तपाईं माथि अमूर्त हेर्नुहुन्छ, के तपाईंले टोनल गुण देख्नुहुन्छ? एक पोस्ट आधुनिक कलाकारको रूपमा म रंग अज्ञेयवादी हुँ। उत्तर आधुनिकतावादमा वास्तवमै रंग सिद्धान्त हुँदैन। मैले छविमा जाँदा केहि रंग सिद्धान्तहरू बनाएको छु। टोनल क्वालिटीले मलाई महत्व दिएको छ।
मेरा धेरै कामहरूमा म रचनाको संरचना दोहोर्याउँछु। यो ती अवसरहरु मध्ये एक हो। यदि तपाईं यस छविमा तल टिप्पणी गर्नुभयो भने म धेरै खुशी हुनेछु। जहिले पनि मेरो सors्कलकहरूसँग स eng्लग्न गर्दै, म तपाईंको विचारहरू जान्न चाहन्छु।
यो धेरै उज्ज्वल छवि हो। खुसी भिन्सेन्ट, चित्रकार, डिजिटल उपकरण प्रयोग गर्दछ? यस कुराको तथ्य विन्सेन्टले प्रयोग गर्ने कलाकारको जत्तिकै प्रयोग भएको थियो।
यी उल्लेखनीय आधुनिकीकरणहरू हुन्। मैले मेरो गौरवमा विश्राम लिएको छैन। एस्थेटिकली तस्बिरहरू भ्यान गगको होइनन्। परिणामहरू वास्तवमै मेरो आफ्नै हो। कला मा यो लिनको लागि धेरै साहसी स्थिति हो।
पाठकलाई हल्का मनोरन्जनको रूपमा मैले तपाईका लागि के राखेको छु। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि जटिलताहरू धेरै गहिराइमा चलेको छ। कम्प्युटर आर्ट आफैंमा आउनु भन्दा पहिले उत्तर आधुनिकता सिद्धान्त हो। मेरो विचार र अनुप्रयोगहरू धेरै विशिष्ट छन्।
तपाईंलाई माफी चाहन्छु। एक कलाकारको रूपमा जीवन निर्वाह गर्न संघर्ष छ। इमान्दारीपूर्वक सुन्नको लागि मेरो आफ्नै सी hornलाई टूटि .्ग गर्नु भनेको मार्ग हो। यदि तपाइँ कलाको काम देख्नुहुन्छ भने तपाइँ साँच्चिकै इच्छुक हुनुहुन्छ कृपया मलाई किनमेल गर्नुहोस्।
मेरो लेखोट पढ्न को लागी धन्यबाद।
प्रश्न: भिन्सेन्ट भ्यान गगको कलाकृतिको आधुनिकीकरण राम्रो विचार हो? जब तपाई छविहरुमा स्क्रोल गर्नुहुन्छ, तपाईले देख्नुहुनेछ कि म भिन्सेन्टको कलाकृतिलाई आधुनिकीकरण मात्र नगरी अघि बढेको छु।